🥇 ▷ Taariikh iyo waqti go'an! Jadwalka munaasabadda Apple ee bisha Sebtember si loogu dhawaaqo khadka iPhone 11 ✅
Taariikh iyo waqti go’an! Jadwalka munaasabadda Apple ee bisha Sebtember si loogu dhawaaqo khadka iPhone 11
Sida had iyo jeerba dhacdo, Apple waxay ku dhawaaqeysaa khadkeeda cusub ee iPhones bisha Sebtember. Ku dhawaaqida kooxda Cupertino ee sanadlaha ah ee taleefanka gacanta cusub ayaa horay loo qorsheeyay iyo taariikhda: waxay noqon doontaa Sebtember 10 saacaddu markay tahay 10 am (waqtiga maxalliga ah) Masraxa Steve Jobs, oo xaqiijinaya wararka xanta ah.
Xiddigaha ku dhawaaqaya ayaa noqon doona iPhones cusub, oo ay u badan tahay in loogu magac daray iPhone 11. Xanta, maalinba maalinta ka sii dambeysa, waxay muujineysaa in Apple ay soo saari doonto seddex nooc: iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Max (ama Max) Pro). Fikradda ayaa ah in moodelkii ugu horeeyey uu ku guuleysan doono iPhone XR marka lagu daro kamarad laba-geesood ah, halka labada ugu dambeeya ay noqon doonaan ku-xigeennada iPhone XS iyo iPhone XS Max.
Qarsoodiga ayaa weli ah waxa lagu dhawaaqi doono munaasabadda. Sanadihii la soo dhaafay, Apple waxay qaadatay fursad ay ku maamusho barnaamijka cusub ee ‘Apple Watch’ laakiin ma jiraan warar badan oo la isla dhexmarayo oo ku saabsan xeeladihii ugu dambeeyay. Hadalku waa ku darista processor-ka aadka u xoogan jiilka soo socda, iyo astaamaha maaraynta awooda cusub.
Waxa dhawaan laga wada hadlay waa imaatinka 16 inch ee MacBook Pro. In kasta oo la filaayey in la dhexdhexaadiyo bisha Oktoobar, haddana waxaa mudan in la bixiyo fiiro gaar ah haddii Apple uusan horay u sii marin imaatinka moodalka. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay ku dhawaaqday buugga xusuus-qorka ee u dhiganta bishii Oktoobar ee la soo dhaafay munaasabad heersare ah, dhaqanka shirkadda waa in la sameeyo war-saxaafadeed noocan ah.
Suurtagalnimada kale ayaa ah imaatinka iPads cusub, maxaa yeelay moodooyinka ugu dambeeyay waxaa la bilaabay sanad ka hor, ama cusbooneysiiya Apple 4K TV, kaas oo la bilaabay labo sano ka hor oo cusbooneysiin kara chipset-ka, in kastoo ay adag tahay in lagu soo bandhigo masraxa. Ama warar ku saabsan adeegga qulqulka Apple Apple +, kaasoo ay shirkaddu dadaal ugu jirtay.
Macluumaadka cusub waa inuu yimaadaa maalmaha soo socda maadaama ay ka yar tahay laba toddobaad meel ka baxsan ku dhawaaqista rasmiga ah ee Apple.